ကိုကိုပုနဲ့ ရွာသားများအတွက်ထန်းရည် ရွာသူများအတွက်ပန်းနဲ့ရွှေငါး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ကိုကိုပုနဲ့ ရွာသားများအတွက်ထန်းရည် ရွာသူများအတွက်ပန်းနဲ့ရွှေငါး
ကိုကိုပုနဲ့ ရွာသားများအတွက်ထန်းရည် ရွာသူများအတွက်ပန်းနဲ့ရွှေငါး
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 6, 2011 in Photography | 42 comments
ဒါကတော့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရွှေပုစွန်ကို မိတ်ဆွေတွေနဲ့မုန့်သွားစားကြတော့ ဘုရားမှာထန်းပင်ရှိနေတာကို မချင့်မရဲဖြစ်နေတဲ့ ကိုကိုပုကို သတိရလို့ပေါ့။
ထန်းပင်မှာ ထန်းရေးအိုးလေးတွေ တန်းလန်းချထားတာ သွားရည်ကျချင်စရာဗျာ။
ကဲကိုကိုပုနဲ့ ရွာသားများအတွက်ပြီးသွားတော့ ရွာသူလေးများအတွက် ပန်းတွေလာပါမယ်။
ဒါပေမယ် လှတယ်ထင်လို့ ရွာထဲက မိတ်ဆွေများအတွက်လက်ဆောင်
ဒါကတော့ အိမ်ရှမင်မများအတွက် ချက်စားဘုိ့မိူပွင့်လေးပါ။
ဒါပေမယ့် သီးညှာတွေကတော့ တစ်ကယ့်သီးညှာတွေဘဲ
ဦးပေါက်ရေ အိမ်ရှင်မအတွေး ကန်ထဲက ကြာရိုးကို ကြာရိုးဟင်းချိုချက်၊ ရွှေငါးလေးကိုကြော်ပြီး မန်ကျည်းမှည့်လေးနဲ့နှပ်၊ မှိုကြော်လိုက်ရင် တရက်စာတော့ ရပေါ့။ (ဒီမှာ မရနိုင်လို့ သွားရည်ကျမိတာမို့ ခွှင့်လွှတ်ပါ) ။ ထန်းပင်နဲ့ ရေကန်ဘေးက အပင်ကို ပုံစံဖော်ထားတာ ဖြစ်မယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ရှု့ခင်း စိမ်းစိုစိုလေးတွေ၊ မိုးရေရွှဲရွှဲတွေ မြင်၇တဲ့ ပုံ( ၃၊၄၊၅) ကို အကြိုက်ဆုံးပါ။
မှီက ကိုပေါက် ရွှေငါးကို ကြော်စားမယ်တဲ့။စက်ရက်ပါပေ့မှီရယ်။
အဲဒီမှာ ဖိနပ် ပန်းရောင်လေးနဲ့ ကလေးမ လေး နဲ့ ၀၀ ဦးလေး ကြီးက ကိုပေါက် တို့ သားအဖ ပဲ ဖြစ်ရမယ်။
လူပုံလည်း မတွေ့မိပါလား ဆူးရယ်။ ဈာန်အမြင်တွေနဲ့ ပြောနေတာများလား ?????????
ရွာသားတွေ အတွက်ကျတော့ ထန်းပင်ပုံက နှစ်ပုံတည်း
ရွာသူတွေ အတွက်ကျတော့ ပန်းတွေ ရော၊ ရွှေငါးတွေရော၊ မှိုပွင့်ကြီးတွေ ရော အားလုံး ရှစ် ပုံ တောင်
ဒါနဲ့ ထန်းပင်က အဖို ပင် ၊ အမ ပင် ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
အခု ထန်းပင် က အဖို လား၊ အမ လား။
ရွှေမင်းသားရေ ရွာထဲမှာ ရွာသူတိုင်းက ပန်းတွေကြိုက်လောက်တယ်လေ။ရွာသားတိုင်းကတော့ ထန်းရေမကြိုက်လောက်ဘူး။
လေးပေါက်သာ pro ကင်မရာ သုံးကြည့်ရင် လေးပေါက်ပုံတွေ ဘယ်လိုထွက်လာမလဲ မသိဘူး
ကြည့်ချင်လိုက်တာ. … လေးပေါက် စမ်းကြည့်ပါလား
အဲဒီချိန်ဆို လေးပေါက်ပုံတွေ eBay မှာ ရောင်းလို့တောင် လောက်မှာ မဟုတ်ဖူး..
ရမှာက တစ်ပုံ တစ်ဒေါ်လာ (မြန်မာငွေ700)
ကိုပေါက်ရေ…… ရွှေငါးဆိုလို့… တောင်ငူစာပေဟောပြောပွဲမှာ ဦးဖုန်း (ဓါတု)က ရွှေငါးနဲ့ ပတ်သက်လို့ပြောသွာတယ်ဗျ…. ။ သိလား ?
” ရွှေငါးဆိုတာက မှန်လုံကန် ကျဉ်း ကျဉ်းလေးထဲမှာ ရေအသေ ကျောက်ခက်အတု အောက်ဆီဂျင် ထည့်ပေးထားရတာ …။ ပြီးတော့ … သူများပေးမှကျွေးမှ စားရတာတဲ့ဗျ..။ သူတို့နဲ့ ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေ ထဲမှာလည်းသူများပေးသမျှ ယူပြီး ကျွေးတာစား ပြီးတော့ ရျွေငါးဆိုပြီး -င်ခေါင်းကျယ်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲတဲ့….။ ” လေ….. တောင်ငူမှာ 5-5-2011 ကနေပြီးတော့ 9-5-2011 ထိ ငါးရက်ကျင်းပသွားတာလေ… ဆရာ/ဆရာမ 11ယောက်နဲ့ ခင်ဗျားရှာပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်ဦး။။။ ဆရာမဂျူးတို့ ဆရာနေ၀င်းမြင့်တို့ မောင်နှံလည်းပါတယ်..။ ဆရာဟိန်းလတ်က ပထမဆုံးဟောတာ…။ နောက်ဆုံးက ဆရာချစ်ဦးညိုနဲ့ ပိတ်ထားတာ….။ အညောင်းခံကြည့်ရကျိုး နပ်ပါတယ်..။
ထန်းရည်စစ်စစ် သောက်ရရင် ကျောက်ကပ် တယ်ကောင်း ဆိုကလား
ကိုပေါက်ကလည်း သူ့ရဲ့ မတော်ရသေးတဲ့ တူလေးကို တော်တော် ချစ်တယ် နော်။ ခေါင်းစဉ်ကိုက ကိုကိုပုနဲ့ ရွာသားများ ဆိုပါလား။ လမ်းသလားရင်းနဲ့တောင် အမှတ်တရ ယူလာပေးတာ။
ထန်းရေကို အ၀သောက် ပြီးရင် ………..
ငါးလေးဒွေဂချက်စရာ… အဲမွှားလို့ ချစ်စရာလေးဒွေတော့ …
အောက်ဆုံးက အောင်ကြူးအတွက် သတ်သက်လွတ်မှိုကြော် ……………..
ကြာနီ ပင်တွေ ရှိသေးတယ်။ မှိုနဲ့ တွဲပြီး ကြာရိုးဟင်းချို ချက်လိုက်လို့ ရသေးတယ်။
ပုံလေးတွေ အကုန်လုံးလှတယ် …တိုင်းကျူး ဦးပေါက်
ထန်းရည်ကို သောက်ပြီး ရွှေငါးကြော်လေးနဲ့ မြည်းလိုက်ရင်တော့ လား …
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု !! ………… သူ့ဆီမှာတန်းစီရမယ်
ဒါဆို ချာတူးရော တန်းစီနေပြီလား အမှတ်စဉ် ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲဟင်
မှီရော မှီပါဦးမလား …………
ကိုပေါက်တို့ မျက်စိလျှင်တယ်နော်….. သဟာဇာတဖြစ်အောင် ရိုက်တတ်လွန်းလို့ ပါ ။ …
လေးပေါက် ပုတစ်ယောက်ပဲ ထန်းရေ ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး ဗျ..။ ကျုပ်လည်း ကြိုက်သပဗျ..။
အညာက ထန်းပင်အောက် မှာ မ ထတန်းသောက်ခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်လေးတွေ လွမ်းသပဗျ…။
ပိုက်ဆံမရှိလို ပေါ့ ထန်းရေကို ပုလင်းတွေထဲသေချာ သွပ်ပြီး ထုတ်ရောင်းလိုက်ရရင်ဗျာ..။ နာမည်ကြီးသွားမယ်။
ဒါပေမယ့် အဘနီ မပါရင်တော့ လာလို့မရဘူးနော်။
ထန်းရည် ဆိုရင် သားလည်းကြိုက်ပါတယ်ဗျာ
ထန်းပင်က ပုလိုက်တာ …မြေအောက်ထိုးဝင်နေတယ်
အဲဒါ ခေတ်ကို ပြတာလေဗျာ။
သစ်ခွပန်းခိုင် အကြီုက်ဆုံးပါ ။
သစ်ခွ ခိုင် က ကျောက်မီးပူပန်း သို့ ကြက်တူရွေးပန်း အဲလို ခေါ်ပါတယ်
တခါတုန်းက မြန်မာတိုင်းမှာ သတင်းပါဖူးတယ်။ မြန်မာမျိုးစိပ် ပန်းစစ်စစ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ် သတင်း မျက်နှာဖုံးမှာ မြင်မိပါတယ်။ ကြာတော့ ကြာပါပြီ။
ပေါင်းစားတာ ကောင်းတယ်ကွဲ့။ ပေါင်းစားတော့ အရိုးလေးကလည်းနူးပြီး အရိုးမစူးတော့ဘူး။ ကိုက်လိုက်ရင်လဲအိနေတာပံ။ကောင်းမှကောင်း။
လေးပေါက်ကလည်း ရွှေဘို ကိုသတိရအောင်လုပ်နေပြန်ပြီ
ရွှေဘိုမှာ နွားကျောင်းရင် သူများထန်းရေအိုးကို လေးခွနဲ.ပစ်ချပြီး အောက်ကနေခွက်နဲ.ခံသောက်ရတဲ.
ထန်းရေက ကြွက်ကြော်နဲ.ဆို တယ်လိုက်တယ်ဗျ
ကြွက်ဆိုလို့ အခုက လယ်ကြွယ်အစစ်ကမရနိုင်တော့
ထန်းရည် ဆိုလို့ သန်လျင်မှာ ထန်းသီးမုန့် တော်တော်ကောင်းတယ် .. ထန်ရည်က ကျွန်တော်လဲကြိုက်တယ် နွေရာသီ ရေခဲစိမ်လေးများသောက်လိုက်ရရင် အမောကိုပြေလို့.. ထန်းရေက အရသာအမျိုးမျိုးရှိတယ် ထန်းပင်ပေါက်တဲ့နေရာကို မှုတည်ပြီး အရသာကွဲတယ်..
ကြုံတုန်းလေးပြောပြချင်တယ် ကျောက်တန်းဟိုဘက် ရွာတွေကို သွားဘို့ ကားလမ်း ဖောက်လုပ်တာ(မြေကြီးသား) လယ်သမားကြီး တဦးက အရိပ်ရဖို့ ဆိုပြီးကိုယ့်အသိနဲ့ကိုပေါ့ ထန်းပင်တွေ စိုက်တာ လမ်းဟိုဘက်ဒီဘက် ဘေးလူ တွေကပြောကြတယ် အစိုးရက သိမ်းလိမ့်မယ် ခင်ဗျားပဲ ပင်ပန်းမှာပေါ့ ဘာညာနဲ့ သူကလဲ ခရီးသွားတွေအတွက် အရိပ်ရအောင် လမ်းမြေသားလဲ ထိမ်းအောင်ဆိုပြီး စိုက်တာ အပင် တထောင်ကျော်..ဘာလုပ်အားပေးမှ မပါ .တယောက်ထဲ စိုက်တာ အခု တချို့ အပင်တွေ နဲနဲပါးပါးသီးနေပြီ အနှစ် ၂၀ ရှိပြီပေါ့အခု ဘေးလူတွေ အကြံပေးတာနဲ့ ပိုင်ဆိုင့်ခွင့် ရှောက်ပြီးတာ ရတယ် အခု အဲဒီထန်းပင်တွေကို တနှစ် သိန်း(၅၀) ပေးတယ် .သိန်း(၇၀) မရလို့ မရောင်းသေးဘူး သူသေတဲ့အထိ မကဘူး နောင်လာနောက်သားတွေပါ စားလို့ရတယ် စေတနာ အကြိုးေးကောင်းပုံလေး….